संगीतमा शक्ति - कभर गर्ल - नारी
असार ७, २०७९ सानै उमेरमा चर्चाको शिखर चुमेकी गायिका हुन्–मेलिना राई । दार्जीलिङमा जन्मिएकी उनको पारिवारिक वातावरण संगीतमय थियो । बुवा जीवेशकुमार राई संगीत प्रशिक्षक थिए । बुवाको प्रेरणाले संगीतमा लागेको बताउने मेलिनाले ११ वर्षको उमेरदेखि गीत गाउन थालेकी हुन् । उनले २१ सय गीतमा आफ्नो सुमधुर स्वर दिइसकेकी छिन् । समाजशास्त्र र अंग्रेजीमा स्नातक गरेकी उनी संगीतलाई शक्तिशाली अस्त्रका रूपमा लिन्छिन् । भनिन्छ, ‘संगीतमा सोच र समाज परिवर्तनको शक्ति हुन्छ ।’ संख्यात्मक भन्दा गुणात्मक कुरामा जोड दिन सके नेपाली सांगीतिक क्षेत्रको उचाइ चुलिने उनको धारणा छ ।
आफ्नै प्रोजेक्टहरूमा व्यस्त छु । मेरो धेरै सिङ्गल ट्रयाकको अडियो सकिइसकेको छ । भिडियोको काम बाँकी छ । अरुको गीत रेकर्डिङमा पनि उत्तिकै व्यस्त छु ।
आफूभित्र भएको कुन कुराले तपाईंलाई अरुभन्दा पृथक् गायिकाका रूपमा स्थापित हुन सघाएजस्तो लाग्छ ?
म आफूलाई अन्य कसैसँग तुलना गर्दिन र पनि म्युजिकप्रतिको मेरो रुचि एवं दृढता कारण हुनसक्छन् ।
महिला भएकै कारण सांगीतिक क्षेत्रमा के–कस्ता चुनौती छन् ?
परिवारबाटै राम्रो सहयोग र प्रेरणा प्राप्त हुँदा मलाई छोरीमान्छे भनेर कहिल्यै रोकटोक भएन । यही कुराले मलाई सांगीतिक क्षेत्रमा सहज बनायो ।
आफूले गाएको कुन गीतले समाजमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सकेजस्तो लाग्छ ?
धेरै त्यस्ता गीत छन् जसले समाजदेखि लिएर युवापुस्तासम्म प्रभाव छाड्न सफल भएका छन् ।
आफ्नो क्षेत्रमार्फत तपाईंले समाज परिवर्तनका लागि के र कतिसम्म गर्न सक्नुहुन्छ ?
संगीत भनेको सन्देश हो जस्तो लाग्छ । हरेक सन्देशका अर्थ हुन्छन् । संगीत एउटा शक्तिशाली विधा हो जसले मान्छेको मनमस्तिष्कलाई छिटै प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसैले संगीतमार्फत गर्न सकिने थुप्रै कुरा हुन्छन् ।
कुशल गायनका लागि सुर, ताल, शब्द वा स्वर कुन कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ ?
शरीरका हरेक अङ्गको आ–आफ्नै महत्व भएझैं कुशल गायकीका लागि यी तीनै कुराको सम्मिश्रण उत्तिकै जरुरी छ ।
अहिलेका युवाका लागि आफ्नो क्षेत्रमा स्थापित हुन आवश्यक मुख्य तीन कुरा के हुनसक्लान् ?
मेहनत, अनुशासन र सम्बन्धित क्षेत्रप्रतिको ज्ञान ।
जातीयताका कारण हाल भइरहेको विरोधप्रति यहाँको के धारणा छ ?
हाम्रो देश निकै पछाडि रहेछ भन्ने थाहा भयो । सोचमा सुधार आवश्यक छ ।
प्रेम र विवाहलाई कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ ?
प्रेम भनेको विश्वास र सम्मान हो भने विवाह भनेको कमिटमेन्ट तथा कानुनी लाइसेन्स पनि हो ।
गायनबाहेक अरु केमा रुचि छ ?
पहिले डान्समा रुचि थियो । पछिल्लो समय फेसन डिजाइनिङतर्फ थोरै रुचि बढेको छ ।
आगामीको योजना र पाठकलाई के सन्देश दिनुहुन्छ ?
बाँचुन्जेल संगीतमै बगेर यसैमा रमाउने मन छ । यसै क्षेत्रसँग जिउन चाहन्छु किनभने मलाई यही क्षेत्रमा केही गर्नु छ । मेरा पाठकहरूलाई सबैलाई माया गरौं, सकारात्मक सोचौं, खुसी भएर बाँचौं भन्न चाहन्छु ।
पहिरन : स्पिङ्स, लाबिम मल
मेकअप : पूनम ब्युटी एकेडेमी, नयाँबानेश्वर
स्थान : लाबिम मल, पुल्चोक
जेष्ठ १३, २०७५ - अन्तर्मनको शक्ति